Nirvan(6 sano jir): Waxaan jeclahay inaan ku heeso heesaha soomaalida. - NorSom News
Nirvan, waa wiil yar oo 6 sano jir ah, kuna dhashay dhashay dalka Sweden. Labadiisa waalid waxey ka soo jeedaan dalka Iiraan, midkoodna kuma hadlo luuqadda Afka Soomaaliga. Hase yeeshee wiilkooda ee 6 sano jirka ah, waxana xiiseeyaa, kuna luuqeeyaa heesaha soomaaliga.
Baraha bulshada ayaa lasoo galiyay Nirvan oo qaadayo heeso soomaali soomaali ah, gaar ahaan heesaha heesaha uu qaado fanaanka Suldaan Zeeraar.
Nirvan, waxa uu dhigtaa dugsiyada xanaanada caruurta ee magaalada Stocklom. Waxaana xanaanada la dhigto caruur soomaali, sidoo kale waxaa macalin u ah oo wax ka xanaaneeyo macalimad soomaali ah. Wuxuuna sheegay in ku hadalka afka Soomaaliga iyo ku heesitaanka heesaha soomaalida ay yihiin wax xiiso leh.
Halkan ka daawo Nirvan oo ku heesayo mid kamid ah heesaha uu qaado Suldaan Seeraar.
Previous articleGabar 27-sano jir wasiir ka noqotay mid kamid ah wasaaraddaha ugu culus Norway.
Next articleNorway: Qoxooti si qaldan loo xukumay oo kiisaskooda dib loo furi doono.